कोरोना भाइरसबारे २४ प्रश्नका २४ उत्तर : तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कोरोना भाइरसबारे २४ प्रश्नका २४ उत्तर : तपाईलाई थाहा नहुनसक्छ !
जेठ ७ गते, २०७७ - ११:२२
यो रोगको उपचारका सम्बन्धमा पनि फरक फरक दावीहरु गरिएका छन् । नेपालमा मात्रै कतिपयले यसको उपचार गर्न सकिने र आफूले उपचार पत्ता लगाएको समेत बताएका छन् । तर सत्य कुरा के हो भन्ने कुरा नबुझी यस्ता भ्रमपूर्ण कुराका पछि भने लाग्नु हुँदैन ।
जेठ ७ गते, २०७७ - ११:२२ मा प्रकाशित